आखिर कसरी भयो आचार्य चाणक्यको निधन ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
आखिर कसरी भयो आचार्य चाणक्यको निधन ?
प्राचीन भारतवर्षमा यस्ता व्यक्ति जन्मिएका थिए, जसलाई आज पनि सम्झिने गरिन्छ । ति मध्येकै एक हुन् आचार्य चाणक्य । जसलाई कौटिल्यका नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । उनी तक्षशिला विश्वविद्यालयका आचार्य थिए । उनले विभिन्न ग्रन्थको रचना गरेका छन् । जसमा अर्थशास्त्र प्रमुख मानिन्छ । अर्थशास्त्रलाई मौर्यकालीन भारतीय समाजको ऐना मानिन्छ ।
यो बाहेक पनि उनले गरेका कामले उनलाई संसारभर चिनिन्छ । उनको जन्म ईसा पूर्व ३७५ मा भएको थियो भने मृत्यु ईसा पूर्व २८३ मा भएको थियो । तर उनको मृत्यु कसरी भएको थियो, यो अहिले पनि रहस्यमय नै छ । चौथो शताब्दीमा रचित संस्कृतको ऐतिहासिक नाटक मुद्राराक्षसका अनुसार चाणक्यको वास्तबिक नाम विष्णगुप्त थियो । यो नाम उनले स्वयं राखेका थिए । यसको पछाडि एउटा रहस्य पनि छ ।
मगधका राजा धनानन्दद्वारा राजद्रोहको अपराधमा चाणक्यका पिता चणकको हत्या गरिदिएपछि उनले सैनिकबाट बच्नको लागि आफ्नो नाम फेरेर विष्णगुप्त राखेका थिए । पछि उनले आफ्नो पिताको हत्याको बदला पनि लिए र राजा धनानन्दलाई सत्ताच्युत गरे । उसको स्थानमा उनले चन्द्रगुप्त मौर्यलाई राजा बनाए । उनले नन्द वंशको विनाश गरे र मौर्य वंशको स्थापना गरे । यसको जानकारी विष्णुपुराणमा पनि गरिएको छ ।
चाणक्यको नाम, जन्मतिथि, जन्मस्थान र उनको मृत्यु चार वटै कुरा विवादमा छन् । तर सबैभन्दा ठूलो रहस्य उनको मृत्युलाई लएर छ । उनको मृत्यको सन्दर्भमा केही कहानी प्रचलित छन् । तर अचम्मित बनाउने सत्य के हो भनेँ उनको मृत्यु कसरी कसैलाई थाहा छैन । पहिलो कहानीका अनुसार एकदिन चाणक्य आफ्नो रथमा चढेर मगधबाट टाढा जंगलमा गएका थिए र त्यसपछि उनी कहिल्यै फर्किएनन् ।
अर्को कहानीमा उनलाई मगधकै रानी हेलेनाले बिष दिएर मारेकी थिइन् । साथै अर्को कहानीमा राजा बिन्दुसारका मन्त्री सुबन्धुले उनलाई बिष दिलएर मारेका थिए ।